Ukuthola Indlela Ebuyela Emuva Ngemuva Kokulahleka | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Ngangihlale ngifuna impilo yenjabulo nezinga eliphakeme lokuphila, ngakho ngaya eMelika ukuze ngizosebenza kanzima ngokusemandleni ami. Emva kweminyaka embalwa yokusebenza kanzima nokuhlupheka, ngakwazi ukuthola kancane kancane izinto engangizifuna: inkampani yami, imoto yami, indlu yami, njll. Ekugcineni ngase ngiphila impilo “yenjabulo” engangikade ngiphupha ngayo. Phakathi nalesi sikhathi, ngajwayelana nabanye abalisa abambalwa futhi ngajabulela ukudla, ukuphuza nokuzijabulisa nabo ngesikhathi sethu sokungcebeleka. Sonke sasizwana kakhulu, futhi ngangicabanga ukuthi sengithole abantu abalungile. Kodwa-ke ngaqaphela ukuthi babengabangane nje bokuphuza nabo ababevame ukukhulumela umbhedo, futhi lapho ngikhathazekile noma ngicindezelekile kwakungekho namunye wabo engangingaya kuye ngimxoxele izinkinga zami. Akukhona nje lokho kuphela, kodwa babengixhaphaza ngamabomu: Omunye wabo wangiqambela amanga ngonina oseChina ogula kakhulu futhi lapho ngimboleka imali wanyamalala ngaphandle komkhondo. Omunye, wangakithi, waqamba inqwaba yamanga ngokudinga imali yomsebenzi thizeni wangithathela imali ethile. Futhi ngisho nomuntu osondelene kakhulu nami futhi oyisithandwa kimi—intombi yami—wangikhohlisa wangiqola isamba esikhulu semali okwakungithathe iminyaka yegazi, isithukuthuku, nezinyembezi ukuyiqokelela. Ukungabi nanembeza kwalaba bantu kanye nokunganaki komphakathi kwangenza ngazizwa ngicindezelekile futhi ngiphelelwa yithemba. Ngaphelelwa yithemba lokuthi ngingakwazi ukuqhubeka, futhi kwakubonakala sengathi akekho umuntu onganciphisa ubuhlungu nokungabi nalutho engangikuzwa enhliziyweni yami. Emva kwalokho, ngangivame ukuphendukela ekudleni, ukuphuza nokuzijabulisa ukugcwalisa isikhala esasisenhliziyweni yami, kodwa lezi zintokozo zesikhashana zenyama azikwazanga neze ukuxazulula ukuhlupheka kwami kwangokomoya.
Ekwindla ka-2015, isimiselo sanquma ukuthi ngijwayelane nomkami wamanje. Ngaleso sikhathi, umkami wayevele esewamukele umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina. Lapho engitshela ivangeli lombuso, konke kwakubonakala kukuhle kakhulu ukuba ngikukholwe, kodwa ngoba ngangimatasa kakhulu emsebenzini ngatshela umkami ngathi: “Anginaso isikhathi sokukholwa kuNkulunkulu, kodwa uma ufuna ukukholwa, qhubeka. Ukwazi enhliziyweni yami ukuthi uNkulunkulu ukhona kwanele kimi.” Ngelinye ilanga emva kwesigamu sonyaka umkami wangibukisa kanye naye enye yamavidiyo eBandla LikaNkulunkulu USomandla—Izinsuku ZikaNowa Zifikile. Lokho engakubona kuvidiyo kwangishaqa ngempela: Lapho sibhekene nezinhlekelele isintu sasincanyana sibuthakathaka, singakwazi nokumelana nokushayeka okuncanyana nje. Ngavele ngafikelwa ukuthi akukhathaleki ukuthi umuntu unemali kangakanani, kungakanani ukunethezeka akuthokozelayo noma ukuthi usesikhundleni esiphakeme kangakanani, konke kuyize. Lapho inhlekelele igadla futhi ukufa kusibheke emehlweni, zonke lezi zinto eziphathekayo ziyize. Njengoba amazwi kaNkulunkulu uSomandla ethi: “Kepha, kufanele ngikutshele ukuthi ngesikhathi sikaNowa, abantu babekade bedla futhi bephuza, beshada futhi beshadisa kwaze kwafika ezingeni lokuthi kungabe kusabekezeleka kuNkulunkulu ukuba akubone, ngakho wathumela uzamcolo omkhulu ukubhubhisa isintu futhi washiya kuphela umndeni kaNowa wabayisishagalombili nazo zonke izinhlobo zezinyoni nezilwane. Ezinsukwini zokugcina, kepha, labo abayogcinwa nguNkulunkulu yilabo abebethembekile Kuye kuze kube sekugcineni” (“Ingabe Bewazi? UNkulunkulu Wenze Into Enkulu Phakathi Kwabantu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). “Bese ubheka inkathi yamanje: Abantu abalungile njengoNowa abakhonza uNkulunkulu babalekele ububi, abasekho ngisho ukuba khona. Kepha uNkulunkulu usenomusa esintwini futhi uyasisula icala isintu kule nkathi yokugcina. UNkulunkulu ufuna labo abalangazelela ukuthi aqhamuke. Ufuna labo abakwazi ukuzwa amazwi Akhe, labo abangakhohlwanga yilokho abaphathise khona futhi abanikela inhliziyo nomzimba wabo Kuye. Ufuna labo abalalela okwezingane phambi Kwakhe, futhi abangamelani Naye” (“UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Kula mazwi ngangizwa ukuphuthuma kwenhloso kaNkulunkulu yokusindisa isintu. Ngacabanga ngokuthi kulezi zinsuku akekho obonakala ethanda izinto ezinhle noma efisa ukubuya kukaNkulunkulu. Izinhliziyo zabantu zigcwele ukuzicabangela, ukuzidla, nobuqili. Ukuze bathole udumo nengcebo bayahlela futhi bakhelane uzungu, bakhohlisane, futhi baze bagcine ngokubulalana ukuze bathole lokho abakufunayo. Abantu bayizigqila zezifiso zabo zenyama, futhi bahlale begxoba isimilo esihle nobuqotho futhi bangcwabe nonembeza wabo. Abantu balahlekelwe ubuntu, kanti izinga lenkohlakalo yesintu ngempela selingaphezu kwaleliya lesikhathi sikaNowa. Kodwa uNkulunkulu akakasibhubhisi isintu ngenxa yalobu bubi nokukhohlakala, kodwa kunalokho usebenzisa izindlela ezahlukene ukuxwayisa isintu futhi asinike ithuba lokuphenduka futhi siye kuNkulunkulu. Lapho ngininga ngamazwi kaNkulunkulu, inhliziyo yami yathintwa kakhulu uthando lukaNkulunkulu. Ngaphinde ngacabanga nangendlela umhlaba owawuba mubi ngayo futhi ukhohlakala usuku nosuku, ukuthi izinhlekelele zabe ziya ngokuya ziba zinkulu, nokuthi lapho uNkulunkulu ekugcineni ebhodla ulaka Lwakhe ebubini babantu futhi ebhubhisa isintu, yonke imali nezikhundla engizobe senginazo ngeke kukwazi ukungisindisa. Ukuza phambi kukaNkulunkulu nokufuna iqiniso kuphela umuntu angathola ngakho ukuvikelwa. Lapho ngicabanga konke lokhu kwakungathi ngivuka ephusheni, futhi imizwa yami yangitshela ukuthi kufanele ngize phambi kukaNkulunkulu ngamukele insindiso Yakhe njengoba lena kungukuphela kwendlela yokusindiswa. Uma ngingalahlekelwa yithuba lokusindiswa ngenxa yokufuna kwesikhashana ukujabula kwangokwenyama ngangizozisola impilo yami yonke! Ngenxa yalokho, ngoMeyi 2016 ngaqala ukukholwa kuNkulunkulu futhi ngahambela imihlangano.
Kungekudala emva kokukholwa kuNkulunkulu, ngangicinga kuwebhu ngahlangana nezinye izinkulumo ezingamanga ezazilahla futhi zihlambalaza iBandla LikaNkulunkulu USomandla. Ukufunda amanga nokuhlambalaza uNkulunkulu uSomandla kwangishiya ngishaqekile okwesikhashana. Babethini uma bethi “benza abantu babanikeze imali yabo futhi abahloniphi imingcele phakathi kwamadoda nabesifazane”? Lokho engangikufunda kwakubonakala kunengqondo ethile futhi kwaba nzima kimi ukwahlukanisa phakathi kokulungile nokungalungile, iqiniso namanga. Ngadideka futhi ngaphiceka, futhi umlilo wami ovuthayo okholweni lwami kuNkulunkulu wacima ngaleso sikhathi ngenxa yezinto ezimbi engangizifundile. Ngaleso sikhathi ngezwa ngemuva umkhwekazi wami ekhuluma nomkami ocingweni mayelana nokunikela imali ebandleni, nokwangenza ngakholwa kakhulu yilokho engangikufunda ku-inthanethi. Emva kwalokho, ngayekisa umkhwekazi wami ukuqhubeka ukunikela ngenye imali futhi nganxusa umkami ukuba ayeke ukukholwa kuNkulunkulu uSomandla, ukuze ngigweme ukuthi sikhohliswe. Kodwa umkami akazange angilalele nhlobo, futhi wathi kimi ngokuqinile: “Isimo sangempela asinjengalokhu okufunde ku-inthanethi, lokhu okuku-intanethi kungamahemuhemu, konke kuwubufakazi bamanga nje! ...” Wayesekhipha incwadi yamazwi kaNkulunkulu futhi waqala ukuhlanganyela nami, kodwa ngase ngivele ngiqiniseke ngokuphelele ngamahemuhemu engangiwafundile ngakho angizange ngimlalele nakancane. Esikhathini esingengakanani, abanye abafowethu nodadewethu beza ekhaya lethu, kodwa nabo angizange ngibanake. Kulezo zinsuku ngangihlala ebumnyameni, futhi ngangihlale ngikhathazekile ngokuthi umkami nomkhwekazi wami babekhohliswa. Ngangikhathazeke kangangokuthi ngangingakwazi nokudla futhi ngingakwazi nokulala kahle ebusuku, futhi ngibhekene nokucindezeleka okukhulu kwengqondo. Ebona isimo esidabukisayo engangikusona, umkami waphinde wazama ukuhlanganyela nami futhi. Wavula incwadi yamazwi kaNkulunkulu uSomandla futhi wakhetha lesi siqephu ukuze angibonise: “Engikufunayo akuyona imiqondo yomuntu noma imicabango yomuntu, ingasaphathwa eyokufuna imali noma izimpahla zakho. Engikufunayo yinhliziyo Yakho, uyaqonda? Yilena intando Yami, futhi ngaphezu kwalokho yilokhu engifuna ukukuthola” (“Isahluko 61” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Umkami waphinde wangifundela izimiso zokuphathwa kwempilo yebandla LikaNkulunkulu uSomandla: “Ibandla alivumeli muntu ukuba acele abanye abantu ukuthi benze iminikelo ngokushumayela noma ngasiphi esinye isizathu. Bonke labo abazimisele ukukhuluma ngokwenza iminikelo banezinhloso ezifihlakele” (“Izimiso Zokusungula Ibandla Nokuphathwa Kwempilo Yebandla” kwethi Imilando Ekhethiwe Yamalungiselelo Omsebenzi WeBandla LikaNkulunkulu USomandla). Wayesehlanganyela nami ngalokhu: “Ebandleni LikaNkulunkulu uSomandla kukhona izindinganiso nezimiso ezidingekayo kuzo zonke izingxenye. Mayelana nokunikelwa kwemali nezinye izinto, amazwi kaNkulunkulu uSomandla asho ngokucacile ukuthi uNkulunkulu akafuni imali noma izinto zethu. Izimiso zokuphathwa kwempilo yebandla nazo zibeka ngokucacile ukuthi ibandla alivumeli noma ubani ukuba ashumayele ngokunikela ngemali noma asebenzise noma iyiphi indlela yokucabanga ukuze akhuthaze abantu ukuba banikele ngemali. Seloku ngaqala ukulandela uNkulunkulu uSomandla, ibandla alikaze lingicele ukuba nginikele nangesenti elilodwa. Ibandla aligcini nje ngokungaceli abantu ukuba banikele ngemali, kodwa linikeza bonke abafowethu nodadewethu abangamakholwa eqiniso izincwadi, ama-CD, njll mahhala. Manje, umama ufuna ukunikela ngemali ukuze asize abanye abafowethu nodadewethu abanezinkinga zezimali. Ukwenza lokhu ngokuzithandela kwakhe siqu; akekho omphoqa ukuba akwenze. Futhi-ke, ukusiza abantu abaswele kuyisenzo esihle, ngakho-ke akukho angakuthethiselwa ngalokho, akunjalo?”
Emva kokufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla nokulalela ukuhlanganyela komkami ngakukhumbula ngokungalindelekile ukuthi ngaphambili omunye udade wayengitshele ukuthi iBandla LikaNkulunkulu uSomandla aliyamukeli iminikelo evela kumalungu amasha, futhi noma ubani ofuna ukunikela ngemali noma ezinye izinto kufanele athandaze izikhathi eziningana kuqala kuze kube yilapho enesiqiniseko sokuthi uzimisele ngokuphelele ukwenza kanjalo futhi ngeke azisole. Uma ibandla licabanga ukuthi imali nezinye izinto azinikelwanga ngokuzithandela, ngeke neze lizamukele. Lapho ngikhumbula lokhu, ezinye zezinkathazo kanye nokukhathazeka engangikade nginakho kwancipha kancane, kodwa ifindo elalisenhliziyweni yami alizange likhululwe ngokuphelele. Umkami wabona ukuthi ngangisakhathazekile, futhi azi ukuthi ngicabangani wathi: “Ungawakholwa la mahemuhemu. USathane ufuna ukuphazamisa nokubhubhisa umsebenzi kaNkulunkulu wokusindisa abantu, futhi asivimbele ukuba size phambi kukaNkulunkulu futhi samukele insindiso, ngakho-ke uzosho zonke izinhlobo zemfucuza bese enikeza zonke izinhlobo zobufakazi bamanga. UNkulunkulu ungcwele futhi uNkulunkulu uyabuzonda ububi besintu. Ngokuqondene nalabo bantu abangenalo igama elihle futhi abangakwazi ukuziphatha ngendlela phambi kwamalungu obulili obuhlukile, iBandla LikaNkulunkulu uSomandla alibamukeli. Lokhu yinto uNkulunkulu uSomandla akhulume ngokusobala ngayo.” Khona-ke umkami wangifundela ivesi lamazwi kaNkulunkulu: “Abantu abaningi bayoguqa bacele isihe nentethelelo ngoba kuduma imidumo eyisikhombisa. Kodwa lena kuyobe kungaseyona iNkathi Yomusa: Kuyobe kuyisikhathi solaka. Ngokwabo bonke abantu abenza ububi (labo abahlobongayo, noma abahwebelana ngemali engcolile, noma abangenamimngcele ecacile phakathi kwamadoda namakhosikazi, noma imimoya yabo ivimbekile, noma abaphethwe yimimoya emibi, njalo njalo—bonke ngaphandle kwabakhethiwe Bami), akekho oyodedelwa, noma axolelwe, kodwa bonke bayophonswa phansi eHayidesi futhi babhubhe kuze kube phakade!” (“Isahluko 94” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu uSomandla ahloniphekile futhi anolaka futhi enza izinhliziyo zabantu zibe nokwesaba nokuhlonipha uNkulunkulu. Nganginomuzwa wokuthi isimo sikaNkulunkulu sokulunga asibekezeleli amaphutha omuntu. UNkulunkulu ubazonda kakhulu abantu abafebayo, futhi lolu hlobo lwabantu luyogcina lubhekene nesijeziso sikaNkulunkulu sokulunga. Ukuqaphela lokhu kwaqeda ezinye zezinto ezazingikhathaza. Umkami wabe esehlanganyela nami ngalokhu okulandelayo: “Lapho uNkulunkulu enza umsebenzi Wakhe weNkathi Yomthetho noma ubani owayeziphatha ngendlela yobufebe wayekhandwa ngamatshe aze afe. Lokhu kubonisa ngokucacile isimo sikaNkulunkulu sokulunga, sobukhosi, nolaka. Enkathini Yombuso, ngokuphathelene nobudlelwane bezocansi imithetho kaNkulunkulu yokuphatha iqonde nakakhulu. Njengoba kusho emazwini kaNkulunkulu: ‘Umuntu unesimo esikhohlakele futhi, ngaphezu kwalokho, unemizwa. Ngenxa yalokhu, akuvumelekile neze ukuba amalungu amabili obulili obungafani asebenze ndawonye engaphelezelwa lapho enza umsebenzi kaNkulunkulu. Noma yibaphi abantu abatholakale benza lokhu bazoxoshwa, akukho ukukhetha iphela emasini—futhi akekho oxolelwayo’” (“Imiyalelo Eyishumi Yokuphatha Okufanele Ilalelwe Abantu Abakhethiweyo bakaNkulunkulu ENkathini Yombuso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni).
Lapho umkami efunda la mazwi kaNkulunkulu ngakhumbula esinye isehlakalo esenzeka ngentwasahlobo ka-2016. Ngaleso sikhathi, ngangingakaphenyi kahle umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina. Ngangihambisa umkami nomunye udadewethu wasebandleni ngibayisa kwesinye isifunda. Endleleni, sama ukuze umkami akwazi ukwenza okuthile, lapho ephuma emotweni nalo dade waphuma. Kwakubanda futhi kunomoya ngaphandle, udade lo wayemi eceleni kwemoto elokhu egxoba izinyawo phansi ukuze azigcine efudumele. Ngamemeza ukuba angene emotweni kodwa wathi: “Akunankinga. Ngifuna ukuma ngaphandle kwesikhashana.” Kwathatha isikhathi eside kakhulu ukuba umkami abuye, futhi waze wangena lapho emotweni lo dade. Embona ukuthi wayeqhaqhazela ngenxa yamakhaza umkami wambuza: “Kuyabanda kakhulu ngaphandle. Awuhlalanga ngani emotweni?” Lo dade waphendula: “Kuyisimiso sokuphatha sasebandleni lethu ukuthi indoda nowesifazane abakwazi ukuhlala bodwa ndawonye noma baxhumane ngokomzimba. Lokhu kungesinye sezimfuneko uNkulunkulu asifunayo kubantu bakaNkulunkulu abakhethiwe, futhi kufanele sisilandele ngokuqinile.” Lapho ngizwa lokhu, ngaqaphela indlela elihluke ngayo iBandla LikaNkulunkulu USomandla kubantu abavamile—ngisho nasezintweni ezincanyana bahlale bezihlola. Lapho ngikhumbula lesi sehlakalo kwathi mangizisakaze ekhanda ngokuba ngingaphenyi kahle amaqiniso kodwa esikhundleni salokho ngikholwe ngobumpumputhe amanga amahemuhemu aku-inthanethi. Lapho ngicabanga ngezikhathi zonke engangixhumane ngazo nabafowethu nodadewethu beBandla likaNkulunkulu uSomandla futhi ngibona indlela ababeziphatha kahle ngayo kwamanye amalungu obulili obuhlukile, indlela abalunge futhi beqotho ngayo ngendlela abakhuluma futhi abenza ngayo, indlela ababeqotho ngayo lapho besebenzisana nabantu, kwakusobala ukuthi lawo mahemuhemu aku-inthanethi ayeqhelelene kakhulu neqiniso. Ngalesi sikhathi ngazizwa nginamahloni ngokukhohliseka kalula kangaka ngamahemuhemu aku-inthanethi ayeyizinkomba zokunyundela iqiniso noma ukwenziwa kwetulo okuqondile, kanye nokungabaza ngoNkulunkulu uSomandla neBandla LikaNkulunkulu USomandla. Ngangiyisiphukuphuku esididekile kakhulu! Umkami wabe eseqhubeka nokuhlanganyela kwakhe: “UNkulunkulu ube sesimweni somuntu emhlabeni ojwayelekile ukuze aveze amaqiniso, ahlulele abantu, futhi ahlanze abantu. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu ufuna ukusindisa abantu ngokuphelele ekubuseni kukaSathane. Ufuna ukususa ngokuphelele izimo zethu ezikhohlakele—ukuzidla kwethu, ubuqili, ukukhohlisa, ukuzicabangela, inkohlakalo, ububi, ukungcola, njll, futhi asisize ukuba sifeze uguquko esimweni sethu sokuphila ukuze siphile njengabantu beqiniso. UNkulunkulu uyazi ukuthi isintu sikhohlakaliswe ngokunzulu uSathane ngakho-ke asinalo ikhono lokunqoba isono. Ukuze kuqinisekiswe ukuthi abantu abacasuli isimo sikaNkulunkulu ngesikhathi bamukela insindiso kaNkulunkulu, ngakho-ke bagweme ukuqedwa nokujeziswa, uNkulunkulu ubeke izinqumo zokuphatha zeNkathi Yombuso ukuze agcine amakholwa esendleleni. Noma ubani ocasula izinqumo zokuphatha uzojeziswa nguNkulunkulu, futhi abona kakhulu bazoxoshwa endlini kaNkulunkulu futhi balahlekelwe yiwo wonke amathuba okusindiswa. Ukubeka kukaNkulunkulu lezi zinqumo zokuphatha ibandla ukwenzele ukuba sithole ulwazi lwangempela mayelana nesimo sikaNkulunkulu sokulunga esingafanele sicasulwe, kanye nokuthi futhi sibe nemithetho yokusigcina sisendleleni eqondile. Ngale ndlela, kuyohlale kunomugqa okungafanele siweqe kukho konke ukuziphatha kwethu, futhi uma sihamba ngaphakathi kwale mingcele, ngakho-ke singakwazi ukugwema ukulingwa nguSathane. Lena yindlela kaNkulunkulu yokusigcina futhi, ngisho nangaphezulu, uNkulunkulu ubonisa uthando Lwakhe lwangempela ngathi!” Ngesikhathi ngilalele ukuhlanganyela komkami ngazithola ngilokhu ngivuma ngekhanda ngingazelele, futhi yilokhu okwakhulula ifindo elalisenhliziyweni yami ngokuphelele futhi ukuhlupheka okwakukade kungigubezele kwaphela. Emva kwalokho, ngaphinda ngabamba iqhaza emihlanganweni yebandla.
Njalo lapho ngikhumbula lokhu okuhlangenwe nakho kuhlala kuba khona ukwesaba okungapheli enhliziyweni yami ngoba ngabona ukuthi ayingozi kangakanani la mahemuhemu nokuthi ngacishe ngadidwa kanjani yiwona futhi ngalahlekelwa yithuba lensindiso kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Enkathini Yomusa, ama-Israyeli nawo adidwa ngamahemuhemu amanga futhi agcina ekungavumi ukuthi iNkosi uJesu yayingukufika kukaMesiya. Bayishiya iNkosi uJesu futhi ngaleyo ndlela balahlekelwa yinsindiso yeNkosi. Lokhu kwangenza ngaqaphela ukuthi ayizithiyo ezinkulu kangakanani amahemuhemu ekuthini abantu bamukele indlela yeqiniso! Kodwa engangingakakuqondi ukuthi kungani kunamahemuhemu amanga emaningi kangaka namahemuhemu aku-inthanethi ngeBandla LikaNkulunkulu USomandla kodwa kube kusobala kangaka ukuthi bayibandla elilungile. Ngakho, emhlanganweni, ngawubuza lo mbuzo kubafowethu nodadewethu ukuze sihlanganyele ngokukhululekile ngawo. Abafowethu nodadewethu bangidlalela enye yamabhayisikobho evangeli, Phunyuka Kunoxhaka, futhi le bhayisikobho yakuxazulula ngokuphelele ukudideka kwami. Ngokuhlanganyela okuncane okwengeziwe okuvela kubafowethu nodadewethu ngase ngikwazi ukuqonda nakangcono ukuthi ukusetshenziswa kwamahemuhemu ukuphazamisa nokuchitha umsebenzi kaNkulunkulu kungenye yezindlela zikaSathane ezivame kakhulu. Lapho iNkosi uJesu ifika ukuzokwenza umsebenzi Wayo, abaholi bamaJuda, abaphristi abakhulu, ababhali nabaFarisi babefuna ukuqinisekisa ukuthi babeqhubeka nokulokhu belawula abantu bakaNkulunkulu njalo, ngakho-ke baqamba amahemuhemu amaningi ngeNkosi uJesu. Bahlambalaza iNkosi uJesu ngokuthi yayethembele enkosini yamadimoni ukuba akhiphe amadimoni, bayimangalela ngamanga iNkosi uJesu ngokuthi yayingavumeli abantu ukuba bakhokhe intela kuKesari, futhi bafakaza ngamanga ngokuthi isidumbu seNkosi uJesu sebiwa ngabafundi Bakhe nokuthi akavukanga. Nginesiqiniseko sokuthi ukube i-inthanethi yayikhona ngaleso sikhathi labo baholi bezenkolo babeyofaka wonke amahemuhemu abo nobufakazi bamanga ku-inthanethi ukuze bahlambalaze, bahlaze futhi balahle iNkosi uJesu ngempumelelo. Namuhla, eNkathini Yombuso, uNkulunkulu uSomandla wenza umsebenzi wokuveza amazwi okwahlulela nokuhlanza umuntu, futhi uhulumeni waseChina kanye nabafundisi kanye nabadala emphakathini wenkolo basebenza njengamathuluzi kaSathane. Ukuze bafeze umgomo wabo wokulawula nokubopha abantu, bayahlambalaza futhi balahla uNkulunkulu uSomandla futhi baqamba inqwaba yamahemuhemu nobufakazi bamanga ukuze babhece futhi bahlaze iBandla LikaNkulunkulu uSomandla. Bafuna ukudida abantu futhi babagcine ebumnyameni, bese bazama ukwenza abantu ukuba balahle umsebenzi kaNkulunkulu wensindiso ezinsukwini zokugcina futhi babalandele ekuphikisaneni noNkulunkulu. Ngempela uSathane mubi kakhulu futhi uyenyanyeka!
Abafowethu nodade base bengifundela ezinye iziqephu ezimbili zamazwi kaNkulunkulu: “Emhlabeni, lonke uhlobo lomoya omubi luyazulazula lufuna indawo yokuhlala, futhi luhamba luthungatha ngokungaphezi izidumbu zabantu ezingadliwa” (“Isahluko 10” sengxenye ethi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). “USathane uhlale eshwabadela ulwazi abantu abanalo Ngami ezinhliziyweni zabo, njalo, ekhiphe amazinyo ekhiphe nezinzipho, ezabalaza kabuhlungu okokugcina esezofa. Ingabe manje ufisa ukuthunjwa amaqhinga akhe agcwele inkohliso? Ingabe ufisa, ukuthi njengamanje isigaba sokugcina somsebenzi Wami sesiphelile, uziqedele wena impilo yakho?” (“Isahluko 6” sengxenye ethi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Baphinde bangitshela ukuthi amazwi kaNkulunkulu uSomandla asitshele isimo sangempela mayelana nempi engokomoya, okungukuthi ukuze avimbele abantu ngaphambi kokuba bakwazi ukuza phambi kukaNkulunkulu futhi afeze umgomo wakhe wokubashwabadela, uSathane wenza zonke izinhlobo zokukhohlisa. Lokhu kubandakanya ukusabalalisa amahemuhemu nokufakaza amanga nge-inthanethi, ukwenza abaholi benkolo bahlukumeze futhi besabise amakholwa, nokutshela amalungu omndeni ukuba awacindezele futhi awavimbele ukulandela uNkulunkulu uSomandla. Ngamafuphi, noma yini esenza sibe nokungabaza, ukuphika noma ukuhambela kude noNkulunkulu ivela kuSathane. Uma abantu bengakwazi ukuthola amaqiniso, khona-ke abasoze bakwazi ukubona ngale kwamaqhinga kaSathane, bazolahlekelwa kalula yithuba lokuzuza insindiso kaNkulunkulu, bese beshona phansi futhi ekugcineni babhujiswe kanye noSathane. Ngibonga ubuholi bukaNkulunkulu ngoba ngakwazi, ngokubukela amabhayisikobho eBandla LikaNkulunkulu uSomandla nokulalela ukuhlanganyela kwabafowethu nodadewethu, ukubona ngokucacile ububi bukaSathane nengqikithi yakhe eyesabekayo kanye nokubona ngale kwamaqhinga kaSathane.
Selokhu ngaqala ukulandela uNkulunkulu uSomandla sengithole ukudedelwa kwangempela nenkululeko. Manje, kungakhathaleki ukuthi kwenzekani kimi ngingakwazi ukufunda amazwi kaNkulunkulu futhi ngithandaze kuNkulunkulu ukuba angisize ngithole indlela yokwenza. Abafowethu nodadewethu ebandleni bonke bavumelana nezimfuno zikaNkulunkulu futhi bafuna ukuba ngabantu abathembekile. Ubuhlobo babo bobudlelwane busobala futhi buvulelekile, futhi kaningi bayasizana futhi bayesekana ngakho konke okusemandleni. Njengelungu lebandla, asikho neze isidingo sokuba ngikhathazeke ngokuthi kukhona umuntu ozozama ukungehlisa, angikhohlise, noma angixhaphaze. Ngizizwa ngijabule futhi ngenelisekile ngempela, futhi le yiyona mpilo engihlala ngiyifuna.
Okwedlule: Ukubaleka “Emphandwini Wengwe”
Okulandelayo: Isivunguvungu Esadaleka Ekhaya Ngodaba LwaseZhaoyuan Lomhla ka- 28 kuMeyi
uYixin, eSingapore NgoNovemba 2016 ngajwayelana, ngoFacebook, noMfowethu uLin noDade uZhang noXiaoxiao beBandla likaNkulunkulu uSomandla....